Yahlulahlula iFayile enkulu yePST kwiifayile ezincinci-Isikhokelo samanyathelo ngenyathelo
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Yahlula-hlula ifayile yePST enkulu kwabaNcinci
usebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukwahlula Ifayile enkulu kwiiNcinci
Ngokukhula okukhawulezileyo konxibelelwano lomntu kunye nolwazi, ifayile ye-PST ye-Outlook, equlathe le datha, nayo iyanda kakhulu. Ke ngoko, ngamanye amaxesha kufuneka sahlule ifayile enkulu ye-PST kwizinto ezincinci, ngaso nasiphi na kwezi zizathu zilandelayo:
Ubungakanani obukhulu befayile kunye nenani elikhulu lezinto ziya kukhokelela kwisantya esicothayo kwimisebenzi emininzi, enjengokukhangela, ukuhamba, njl njl.
Iinguqulelo ezindala ze-Outlook (97 ukuya ku-2002) azixhasi iifayile ezinkulu kune-2GB, ke ukuba ifayile yakho ifikelela kuloo mda kodwa usafuna ukuyisebenzisa kunye neenguqulelo ezindala, emva koko indlela ekuphela kwayo kukwahlulahlula kube ngamaqhekeza amancinci.
Ukuba unokufikelela kwimixholo yefayile enkulu ye-PST kwi-Outlook yakho, unokusebenzisa Umboniso wokwahlulahlula ngesandla.
DataNumen Outlook Repair inokukunceda ukwahlulahlula ifayile enkulu ye-PST kwizinto ezincinci.
Yahlula-hlula ifayile yePST enkulu kwabaNcinci